Gbasara Anyị | Huai'an Ruisheng International Trade Co., Ltd.
Huai'an RuiSheng uwe Co., Ltd. tọrọ ntọala na 2010, bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi na mbubata ahia na mpaghara Huai'an Jiangsu, China, ọ na-ekpuchi mpaghara nke 3500sqm, ụlọ ọrụ nhazi nke 1100sqm, ma nwee ike ịnwe ndị mmadụ 1500 ka ha rụọ ọrụ, nke bụ otu n'ime nnukwu uwe ụlọ ọrụ dị na Huai'an. Na June 2018, ụlọ ọrụ ahụ gafere akara asambodo mba BSCI nke mba ụwa. Anyị nwere onwe anyị 2 ụlọ mmepụta ihe na Huai'an, onye a na-akpọ RuZhen pụrụ iche na T-Shit, Polo, Ogologo ọkpa, nịịka, Sportwear, jaket, mkpuchi, ọzọ na-akpọ Haolv ọkachamara na-ehi ụra Set, Quilt, Ohiri Isi, Matara, Dechọ Mma.
Ndị ọrụ anyị na-ekpuchi ụdị 400 na mba 30 n'ụwa niile iji merie ntụkwasị obi nke ndị ahịa niile nwere oke mma, ma nweta otuto dị elu site n'aka ndị ahịa kemgbe e guzobere ya. Companylọ ọrụ ahụ nwere echiche ọrụ ahụ na “Ogo na-egosi Ike, Nkọwapụta Inwe Ihe ccessga nke Ọma”, ma na-agba mbọ ime nke ọma na akụkụ ọ bụla site na ntanetị nke ọ bụla, usoro nke usoro iji mepụta nyocha ikpeazụ, mbubata na mbupu. Anyị na-ekwusi ike na ụkpụrụ nke mmepe nke "Elu ọma, arụmọrụ, Eincerity na Down n'ụwa na-arụ ọrụ ụzọ" iji nye gị ezigbo ọrụ nhazi! Anyị ji obi anyị niile nabata gị ịbịa leta ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị maka imekọrịta!
Productiondị akwa akwa akwa nke akwa nwere ihe karịrị narị igwe narị abụọ nke ụlọ na-akwa akwa, na ụdị akụrụngwa zuru ezu; o nwere ndị ọrụ 180, gụnyere ndị ọrụ lathe 100, ndị ọrụ 20 ịkwa akwa, ndị ọrụ nyocha nyocha 40 na ndị ọrụ nchịkwa teknụzụ na ndị ọrụ 20 ọzọ.
na 2011, ụlọ ọrụ mmepụta uwe uwe kwagara n'ime ulo oru ogige. Ebe osisi ohuru ohuru nwere gburugburu ebe mara mma, mmeputa zuru oke, ndu, nchekwa na ulo oku. Companylọ ọrụ ahụ na-ele ndị ọrụ anya dị ka akụnụba kachasị ukwuu nke ụlọ ọrụ ahụ, ma nwee ezigbo ọdịbendị na ọdịbendị ụlọ ọrụ.
Uisheng International Trade Co., Ltd.Originated na 1999, obere ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị mmadụ iri na abụọ na-ahụ maka ịkwa akwa akwa. Mgbe afọ 20 mmepe bidoro ， Ugbu a, o nwere ikike ịhazi, zụlite, rụpụta uwe na akwa. .E nwere ugbu a a akwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe na a uwe nhazi ụlọ ọrụ ọkachamara na-akpa na ịkpa ákwà ， Nwere onwe ha technology Quality ControlDough ngwa ị nweta ngalaba.There nwere ihe karịrị 200 ẹdude ọrụ. Ahịa nke afọ 5 nde US.
Ngwa ụlọ: T-shirts, uwe elu Polo, uwe ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị yi uwe, uwe ụmụ nwoke na nke ụmụ nwanyị, uwe elu jaketị, uwe mwụda, uwe ejiji na usoro ndị ọzọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100.